Successfully updated. Successfully updated. MAGAZINE fashion
MAGAZINE makeup | Posted on Dec 8, 2016 by kiki
Eyeshadow Paletteအသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ Urban Decay
Urban Decayကတော့ Night Makeupအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး Afterdarkလို့အမည်ပေးထားတဲ့Eyeshadow Paletteကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
မိန်းကလေးတွေအများစုက နေ့စဉ်မိတ်ကပ်ပြင်ကြပါတယ်။မိတ်ကပ်ပြင်တဲ့အခါ မနက်ပိုင်းဆိုလည်းမနက်ပိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရောင်ဖျော့လေးတွေ၊
ညဘက်ဆိုလည်း တောက်တောက်ပပရှိတဲ့အရောင်လေးတွေကို သုံးလေ့ရှိကြမှာပါ။မနက်ဆို အရောင်ဖျော့ ညဘက်ဆိုအရောင်ရင့်တွေရွေးသုံးဖို့ တခါတလေမှာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရောင်တွေက မလုံလောက်တာ အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်နေ့ဘက်မှာသုံးတဲ့အရောင်တွေက ညမှာ အရောင် မပေါ်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Night-outတွေ Partyတွေဆိုရင် အရောင်မှိန်မှိန်လေးတွေနဲ့ဘယ်လိုမှ မလိုက်ဖက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲဒီပြဿနာတွေက ကင်းဝေးဖို့ Urban Decayက Afterdark Paletteကို ထုတ်လိုက်တာပါ။
Urban Decay Afterdark Paletteဟာ အဓိကအားဖြင့်Night-outနဲ့ ညလိမ်းမိတ်ကပ်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ထားပေမယ့် နေ့ဘက်သုံးလို့ရမယ့်အရောင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရွေးချယ်စရာ ရတနာဆန်တဲ့ အရောင်၁၀ရောင်ပါဝင်ပြီးအမှောင်ထဲမှာတောက်ပနေမယ့် Metallic Colourတွေ ထည့်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရောင်တွေအမည်ကတော့ Alter,Scene,Supersonic,Sinful,Off Duty,Druggie,Backfire,Lounge,Fringeနဲ့ Paralyzedတို့ဖြစ်ပါတယ်။အရောင်ခုနှစ်ရောင်ကတော့အသစ်ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့သုံးရောင်ကတော့ Urban Decay Junkieတွေမှာ မရှိဘဲမနေသင့်တဲ့အထဲမှာပါပါတယ်။
UrbanDecayဟာ မကြာခင်မှာ Paletteကို Sephoraမှာ ရောင်းချမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပြီး သူ့ရဲ့Pageမှာ ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။Night-out Makeupအတွက် အများကြီးအဆင်ပြေစေမယ့် ဒီPaletteကို မဖြစ်မနေ ၀ယ်ယူသင့်တာတော့အမှန်ပါပဲ။
Save Share this article
Celebrity News | Posted on Mar 25, 2017
ချစ်မဝနိူင်တဲ့ သူတို့ နှစ...
Fashion News | Posted on Mar 24, 2017
2017 CFDA ဆုပေးပွဲရဲ့ စကာ...
Health & Fitness | Posted on Mar 24, 2017
Celebrity News | Posted on Mar 24, 2017
makeup | Posted on Mar 23, 2017